अञ्चल अस्पतालको शौचालय फोहोर थुपार्ने ठाउँ
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २६, २०७३ समय: ९:५४:१०
२६ भदौ, दिलिप सप्तरी । राजविराजस्थित एकमात्र सरकारी अस्पतालकोे शौचालय फोहर थुपार्ने ठाउँ बनेको छ । जिल्लामा ५० हप्ते सरसफाइ अभियान थालेका स्थानीय युवाले दोस्रो हप्तामा गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल पुग्दा शौचालय बन्द रहेको देखे । ताला खोलेर हेर्दा स्लाइनको खाली बोतलले शौचालय भरिएको देखियो ।
शुरुमा त अस्पतालका सरसफाइ कर्मचारीले पानी नभएर शौचालयमा ताला लगाइएको बताएका थिए । तर, पछि युवाहरुले ताला तोडेर हेर्दा फोहोर राखेको फेला पर्रुयो । ‘हामी सरसफाइ गर्दै माथिल्लो तल्लाको मेडिकल वार्डमा गयौं,’ सप्तरी युवा समितिका सदस्य वीरेन्द्र मण्डलले भने, ‘शौचालय पनि सफा पार्न भनेर जाँदा वार्ड्भित्रको चार शौचालयमध्ये तीन वटामा ताला लागेको थियो ।’
पछि अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. दिलीप साहको उपस्थितिमा शौचालयको ताला तोडेर हेर्दा खाली बोतलहरू देखिएपछि उनले आफैं आश्चर्य व्यक्त गरे ।डा. साहले शौचालयमा फोहोर राखिनुमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै अब सरसफाइमा निगरानी गर्ने बताए । उक्त शौचालयलाई सफा गरी तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन थालिएको छ ।
सरसफाइको दृष्टिले अन्य ठाउँभन्दा अस्पताल अझै संवेदनशील मानिन्छ । तर, सगरमाथा अञ्चल अस्पतालभित्र जताततै फोहोर पाइएको छ । बिरामीलाई दिएको सुई अस्पतालभित्रै फ्याँक्नेदेखि कर्मचारीको कक्षमा गुटखाको प्याकेटसम्म फेला परेको छ । आकस्मिक कक्षभित्र प्रयोग भइसकेको रुई, सिरिन्जसहितका सामग्री बिरामीको बेड नजिकै थुपारिएर राखिएको फेला परेको छ । यस्तै, महिला वार्डका कर्मचारीहरु खटिने कोठामा पान परागका प्याकेटहरु भेटिएको छ ।
अस्पतालको प्राङ्गणदेखि आकस्मिक कक्ष, विभिन्न वार्डमा रहेको फोहोर युवाहरुले सफा पारेका छन् । अस्पतालमा फोहोर राख्ने कन्टेनरको पनि कमी देखिएको युवाहरुले बताएका छन् । अस्पताल प्राङ्गणमा सञ्चालित औषधि पसल अगाडि कन्टेनर रहे पनि पसलेहरुले भुइँमै यत्रतत्र फोहोर फ्याँकेको देखेपछि युवाहरुले सचेत गराएका छन् ।अस्पतालभित्र सरसफाइको धेरै समस्या देखिएपछि चकित बनेका मेसु डा. साहले अब सरसफाइमा आफूले निगरानी गर्ने बताए । उनले कर्मचारीले सरसफाइ गर्न नसकेमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाएर भए पनि अस्पताल स्वच्छ राख्ने बताए ।
अस्पतालमा अब राम्रोसँग सफाइ नगर्ने कर्मचारीलाई हटाउने र अबका दिनमा सरसफाइमा ध्यान नदिए सरसफाइ इन्चार्जलाई समेत कारबाही गरिने निर्णय पनि गरिएको छ । अस्पतालका मेसुसहित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. विजय झा, राजविराज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विष्णु गुरुङ, पत्रकार धीरेन्द्र साह, क्रिकेट खेलाडी महबुब आलमसहित युवाहरुको रोहबरमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सप्तरीमा गत साउन २८ गतेबाट ५० हप्ते सरसफाइ अभियान थालिएको हो । नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका उपाध्यक्ष श्रवणकुमार देवको नेतृत्वमा बनेको युवा समितिले युवा सम्मेलन गराउँदै सरसफाइको अभियान सुरु गरेको हो ।